Boqollaal aan Muslimiin ahayn oo laga afuriyay masaajid - BBC News Somali
Image caption Dhowrkii qof ee caddaan ahba waxaa lala fariisi yey qof Muslim ah oo Su'aalaha ay qabaan uga jawaaba
Ujeeddada ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dadkaas loogu sharrixi lahaa waxa ay tahay bisha barakaysan ee Ramadaan iyo in laga jaahil bixiyo su'aalaha ay dadkaasi doonayaan in ay Muslimiinta waydiiyaan.
Cabdulaahi Faarax oo ka mid ah maamulka masaajidkaas ayaa ka hadlay ujeedada kulankaas iyo waxa ay uga golleeyihiin waxa uuna yidhi: "kulamadaan oo kale waxaa laga faa'idayaa in dadka xaafadda, magaalada ama gobolka nala daggan ay arkaan oo ay soo galaan meel masaajid ah oo ay Muslimiinta bartaan su'aalahoodana looga jawaabo"
Saacad kahor xilliga afurka ayey dadkaasi dariska la ah masaajidkaas ay soo fadhiisteen goobta ciyaaraha ee masaajidka iyadoo 7-dii qofba lala fadhiisiyey qof muslim ah oo u sharaxa su'aalaha gaarka ah oo ay qabaan.
Mohamed Shariif oo ka mid yahay ardayda barnaamijkan soo qaban qabisay, waxa uuna BBC-da u sheegay su'aalaha ugu badan ee dadkaasi ay waydiinayeen wuxuuna yidhi "Su'aalaha ugu badan ee dadkaasi na waydiiyaan waxaa kamid ah: sidee u soontaan? Yaad u soontaan? Muxuu yahay ilaaha aad aaminsan tihiin? Xafladdaanna waxay naga caawisay in aan su'aalahaas oo dhan aan uga jwaabno".
Gabdhaha ayaa sidoo kale arrintan ka shaqeynaysay ayagoo dhankoodana la waydiinayey su'aalo kuwaas la mid ah isla markaasna ay uga jawaabayeen dadkii afurka kasoo qayb galay.
Kulankaas ayaa waxaa ka soo qeybgalay qaar ka mid ah madaxda kaniisadaha ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota.
"Arrintan ayaa ah mid dadka la isugu soo dhawaynayo, waa mid daris wanaag muujinaysa iyo in aan wax badan ka ogaanno diinta Islaamka". ayuu yidhi Kurdis Dian.
Muslimiinta ayaa walwal badan ka qaba dhanka nabadgalyada inta lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadan, sida uu sheegay Maxamed Cumar oo ah maamulaha Masaajidka Darul Faruuq. "Bisha Ramadaan maadaan dadku ay masaajidda ku badan yihiin oo ay taraawiix tukadaan, cabsida waddanka kajirta aad bay usoo kordhaysaa, waxaan u baqaynaa in dadka oo tukanaya lasoo weeraro ama dhibaato la gaarsiiyo".